पूर्व विद्यार्थी मिलन केन्द्रद्धारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण - Nigranitimes
होमपेज / मुख्य खबर / पूर्व विद्यार्थी मिलन केन्द्रद्धारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
पूर्व विद्यार्थी मिलन केन्द्रद्धारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
आइतबार, बैशाख १२, २०७८ , निगरानी टाइम्स
बैशाख १२ गते, बयरवन । मोरङ कानेपोखी –६ मा रहेका जनसेवा माविका २०५० सालको पूर्व विद्यार्थी मिलन केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयको छात्राछात्रलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ ।
विद्यार्थीहरुलाई सामाग्री वितरण गर्ने क्रममा शुक्रबार वडा नं. ४ को पञ्चकन्या प्राविमा अध्ययनरत ४५ जना छात्राछात्रलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले र विशेष अतिथि राजमती इङ्नामले विद्यार्थिहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेका थिए । किताब राख्ने झोला र माक्स लगाएतका सामाग्री वितरण गरेका हो ।
कार्यक्रममा अतिथिको रुममा रहेका पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गायत्र श्रेष्ठले पनि शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेका थिए । सो विद्यालयमा विपन्न वर्गका चौधरी र ऋषिदेव लगाएतका छोराछोरी अध्ययनरत छन् । मिलन केन्द्रका सदस्य हाल अमेरिकामा रहेका अनुपराज भट्टराई र कुबेत बस्ने जिरो ऋषिदेवको आर्थिक सहयोगमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका मिलन केन्द्रका नगेन्द्र बस्नेतले बताए ।
कार्यक्रम नगेन्द्र बस्नेतले संचालन गरेको थिए भने सभापती पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चमक बहादुर कार्की रहेका थिए । त्यसैगरी वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष खड्ग बस्नेत, वडा सदस्यहरु रोषन लामिछाने गुरुङ, शिव दुलाल दानबहादुर बस्नेत, कृष्ण कुमारी गुरुङ, चित्रबहादुर राई र टंकेश्वरी याक्खा लगाएत अतिथि रहेका थिए ।
युवा संघद्धारा अक्सिजन सहितको कोरोना हेल्प डेस्क स्थापना
बयरवन महिला सहकारीको भवन शिलान्यास
निषेधाज्ञाको पालना भए नभएको नगरमा अनुगमन्
भाइरसबाट सजक बन्न जानकारी गराउँदै पथरी बजार अनुगमन्
पथरीशनिश्चरेमा १९ जना संक्रमित, संक्रमितको संख्या बढ्र्दै
तलबको माग गर्दै ६ संगठनले बुझाए ध्यान आकर्षण पत्र